Inkabadan 100 Askari oo Saraakiil ay ku jiraan Oo ku dhintay Weerarkii Nafhrunimo ee Afgooye. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Inkabadan 100 Askari oo Saraakiil ay ku jiraan Oo ku dhintay Weerarkii Nafhrunimo ee Afgooye.
On Mar 3, 2018 216 1
Maalintii shalay waxaa degmada Afgooye ka dhacay camaliyad Istish-haadi ah oo lala eegtay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda gaar ahaan kuwa ay tababartay dowladda Imaaraatak Carabta.
Naftii hure katirsan guutada Istish-haadiyiinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo kaxeynayay gaari laga buuxiyay walxaha qarxa ayaa gudaha u galay goobta ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda, waxaana markaas kadib uu qarxiyay gaarigii uu waday.
Macluumaadyo aan heleyno waxay xaqiijinayaan in tirada dhimashada ee camaliyadda ay gaarayaan 112 askari, waxaana ku jira saraakiil sar sare oo katirsan ciidamada dowladda, iyo Tababaryaal u dhashey dalka Koonfur Africa.
Qaar kamid ah magacyada Saraakiisha ku dhintay howlgalkaas ayaa noo suuragashey inaan helno, waxaana kamid ah:-
Cabdullaahi dheere oo ah gaashaanle dhexe, sidoo kalena ahaa Taliyaha guud ee saddexdii hoorin ee daganeyd saldhigga.
Cali Qowdhan oo ah Gaashaanle sare, Sarkaal Qalinle oo ahaa laba xidigle, Sarkaal lagu magacaabo Cabdi Waaxid Xasan Faarax, taliye Hoorin lagu magacaabo Carab Gaashaan, Sarkaal kale oo lagu magacaabo Cabdi Dhuxul, Taliye koox lagu magacaabo Cali Timo-jilic, iyo Calasow dheere oo ah Sarkaal ciidan.
Waxaa jira saraakiil aad u farabadan oo dhaawacyo ku noqday camaliyadda, umana suuragelin Idaacadda Alfurqaan iney hesho magacyadooda.
Waxaa xusid mudan in camaliyadda Istish-haadiyada uu ku dhintay nin kasoo jeeda dalka Imaaraatka Carabta oo ahaa taliyaha guud ee ay hoostagayeen ciidamada dowladda federaalkaee ku sugnaa xerada la weeraray.
Shalay waxay u ahayd shisheeyaha iyo dowladda federeraalka maalin dhiig daadasho badan, waxaana dagaalkii ka dhacay duleedka Balcad lagu dilay 23 askari oo katirsan shisheeyaha Burundi.
Abufatima says 4 years ago
Iska laaya mooyee kafaro may lahayn karame
Kadeed iyo dhibaatiyo waxay ina kurbee yaanba
Kufsi iyo xasuuqeen wuxuu gaal Ku faanaaba
Kursi doon dayuus baro waxay kaashadaan cadawgu
Kalaam kii Ilaahay waxay kohasho taahaanba
Kitaab uu ibliis qoray waxay nagu kadeedaanba
Kufri aan inoo nixin waxay kaashanaha yaanba
Kidbi iyo waraan jirin waxay isla kilaasaanba
Kumaandoos markii ay heshiyo kulul rasaas teene
kafaradi madoobayd miyaan kooxba meel oolin
Kiinyiyo Burundiis miyaan kaamil loo laynin
Kaba qaad ridoobiyo miyaan ps kala haadin
Libta oon kufaaniyo miyaan fay lasoo kuusin
Karaamuu helaa ruux haduu kaashan Eebahaye
Kumanyaal tahiniyadaan u diri geeshka noo kacaye
Kaalmee Ilaahow shabaab kaafir kana suuli